Ciidamada Yahuuda Oo Xiray Sarkaal Ka Tirsan Ururka Xamaas. – Calamada.com
Ciidamada Yahuuda Oo Xiray Sarkaal Ka Tirsan Ururka Xamaas.
calamada July 5, 2018 2 min read
Wararka ka imaanayo dhulka Muslimiinta Falistiin ayaa sheegaya in ciidanka Sahyuuniyadda Yuhuuda ay xireen Wasiir horay uga tirsanaa Maamulka Falistiin, hadana ahaa xubin katirsan ururka Xamaas.
Ninkan la xiray ayaa lagu magacaaba Wasfi Cazat Qabha oo ku magac dheer Abu Usamah, waxa uuna horey usoo noqday Wasiirka Maxaabiista maamulka Falistiiniyinta, saaka ayaana laga xeray gurigiisa oo ku yaala Tuulada Bardicah oo dhacda dhanka galbeed ee Magaalada Janiin.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in la arkayey ciidamo Yahuud ah oo aad u hubeysan, kuwaas oo isku gidaamay hoyga uu degana, kadibna xoog ku galay iyagoona halkaas kasoo xeray Abu Usama.
Muuqaal lagu faafiyey baraha bulshada ayaa laga arki karaa Abu Usama oo indhaha ka xeran, gacmahiisana ay gadaal u xiran yihiin, ciidanka Yuhuudana ay labada garbood kaga jiraan kuwaas oo ku ridaya mid ka mid ah gawaarda qafilan ee ay wateen.
Abu Usaama ayaa ku qeyla dhaaminaya kalimada Yaa Allah, sida dadka goob joogayaasha ah ay soo sheegayaan, lamana oga halka ay ula dhaqaaqeen ciidanka Yuhuuda, balse xarigan ayaa unoqonaya kii Tobanaad oo uu la kulmo.
Xiritaanka Mas’uulkan ka tirsan Xarakada Xamaas, ilaa hada wax war ah kamasoo saarin Xamaas, balse waxaa muuqata inuu qeyb ka yahay xamlo ballaaran oo maalmahan ciidanka Yuhuudu ay ku xirxirayeen, mas’uuliyiin, odayaal iyo dhalin yaro Muslimiin ah oo kasoo jeeda deeganada ay ku hoos jira gumeysigooda.
Wasfi Cazat, Abu Usama ayaa horey usoo noqday wasiirka Maxaabiista Maamulka Filistiiniyiinta Sanadii 2006da, isagoona xiligaa wixii ka danbeeyey marar badan la kulmay isku dayo dil oo lala damacsanaa iyo xariga tiro Sagaal jeer ah, waxa uuna xabsiyada maamulka Yuhuuda kusoo qaatay mudo ka badan 14 sano oo uu isaga kala gooshayay xabsiyada maamulka sahayuuniyda, kuwaas oo uu ugu danbeeyey Jeelka Hadaarim oo sanadkii 2011-kii lagu xiray.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm 21-10-1439 Hijri.
Next: Deerow Dhaqane Oo Lagu Dilay Magaalada Muqdisho.